Ukwenza imishini yamalitha angu-3000 ngosuku e-Uzbekistan
Uhlelo lokugaya 01 Malt Mill 500-800 kg / h 02 Grist Case 2000L 03 Flex Conveyor 1.5M³ / h Brew house 01 Mash tun 1500L 02 Lauter tun 1500L 03 Kettle 1500L 04 Whirlpool tank 1500L 05 Amanzi ashisayo tank 3000L 06 I-steam boiler 200kg / h Ukushisa okupholile kwe-Wort e ...
Imboni kabhiya ilulame kanjani? Bheka imigoqo yokuqhubeka yala mazwe
Imboni kabhiya ilulame kanjani? Bheka imigoqo yenqubekelaphambili yala mazwe Amabha nezindawo zokudlela zivulwe ngokulandelana, kuhambisana nokubuyiselwa komnotho wasebusuku kanye nomnotho ochumayo wezitebele zomgwaqo, i-b yasekhaya ...
Imakethe yobhiya yezandla ngaphansi kobhubhane kanye nezinyathelo zokuphikisa ezithathwe yinkampani yethu Kusukela ngoJanuwari walo nyaka, lolu bhubhane seludlangile futhi izinxanxathela zezitolo, imigoqo, izindawo zokudlela nezindawo zomphakathi zivaliwe. Kuze kube manje, lesi sifo ...
Iwebhusayithi entsha kaShandong Obeer yethulwe ngempumelelo!
Iwebhusayithi entsha kaShandong Obeer yethulwe ngempumelelo! Shandong OBeer Imishini Equipment Co., Ltd. ukuze wonke umsebenzisi azi kangcono i-Obeer Company, manje inkampani yethu yethule iwebhusayithi entsha futhi izokukhombisa imikhiqizo emisha; Wa ...